indlu yamaplanga yale mihla enembonakalo/ (isikhephe) ukuya echibini nasezintabeni - I-Airbnb
indlu yamaplanga yale mihla enembonakalo/ (isikhephe) ukuya echibini nasezintabeni
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCamilla
Indlu efudumeleyo yale mihla esecaleni kweLofssjön kunye nolwandle kunye namachibi amahle ukuya emanzini kunye neentaba. Isikhephe sokuqesha.
Nantsi indawo ukuba ufuna ukuphumla kubomi bemihla ngemihla uze wonwabe nje. Indawo efanelekileyo kunye neekhilomitha eziyi-1 ukuya kwivenkile ye-ica kunye nevenkile yokutyela kunye nokuqesha ibhayisekile njl njl.
Ngoku kukho nesitulo sokutya sosana onokuboleka simahla .
Ukucoca kuqukiwe kwixabiso, kodwa izinto zebhedi neetawuli zithathwa nawe.
Amashiti ebhedi anokuqeshwa ngumbuki zindwendwe ukuba uyazisa xa ubhukisha.
indlu esemaphandleni inocwangciso oluvulekileyo kunye negumbi lokuhlala kunye nekhitshi . Igumbi elininzi njengoko kukho iitafile ezimbini zokutyela.
Ukubona kakuhle iifestile ezinkulu ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye nekhitshi elijongene neLofssjön kunye neentaba. Ikhitshi linawo umatshini wokuhlamba izitya kwaye ngoku ikofu emnandi kunye neMockamaster.
Iveranda enkulu ecaleni kwecala elide.
Amagumbi amathathu okulala amakhulu anebhedi elala abantu ababini. Kwindawo ejonge echibini kukho ibhedi eyi-140 ibe kwigumbi lesithathu kukho ibhedi eyi-90 enokuba yibhedi elala abantu ababini.
Indawo yokungena enee-clinkers kunye nento eyenza kufudumale phantsi.
I-sauna evulekileyo kunye nendawo yokuphumla apho unokubona ichibi kunye neentaba. Iyunithi yamaqanda ixhotyiswe ngamatye kaJade anempawu ezintle kwimpilo yakho.
Ishawa yangasese enomatshini wokufudumeza nowokuhlamba impahla,
Indawo efanelekileyo kwabo banezithuthuthu zabo njengoko unokuya ngqo kwindlu yamaplanga uze uphume emkhenkceni apho kukho umzila we-scooter kunye nomkhondo welizwe. Kulula ukuhla uye emkhenkceni ukuze uthenge intlanzi.
Le ndlu inendawo esembindini enekhilomitha enye kuphela ukuya embindini wedolophu apho unevenkile ye-ICA enento yonke, ivenkile yokutyela, inkampani yabakhenkethi, njl.
Iikhilomitha eziyi-2 ukuya kwi-resort ye-ski. I-Lofsdalen iphezulu kwaye ikhuselekile kwikhephu. Inkqubo yokuphakamisa inemithambeko eyi-25 kuwo onke amanqanaba obunzima kunye nenye yezona ndawo zinkulu zaseSweden ezimalunga neemitha eziyi-500. Ngoncedo lweelifti ezimbini zesitulo esiyi-6, unokusuka entlanjeni ukuya kwisiqithi esiphezulu se-Hovärken esiyi-1125 yeemitha.
Izilwanyana zasekhaya azibhatalelwa ibe akutshaywa. Indawo ethe cwaka. Kodwa kukho abamelwane.
Nceda uqaphele ukuba akukho TV okanye i-intanethi . Kodwa kuhle ukuba ufuna ukuza nekhompyutha yakho kunye neintanethi.
Izinto zebhedi neetawuli ziyafumaneka ukuba ziqeshiswe, kungenjalo ungazihamba nazo .
Kwakhona qesha isitulo esitsha se-berry esivela eBergans, indawo yokunyuka intaba yabantwana Ukhenketho kunye nomntwana wakho.
Ibalungele abantwana ukuya kutsho kwii-70 lbs.
Ukuxhasa. Umva kunye nokuphakama kwesitulo somntwana. Isihlalo esinamanqaku ayi-4. Ibhanti le-Hip. Uncedo lweenyawo kumntwana.
Imvula ebonakalayo kunye nesikrini somoya kunye namacala asongwayo entloko yomntwana.
Ibhegi encinci enokutshintshwa ngasemva.
Inkcazelo ngenkqubo ye-Lofsdalen 's Skid and Skoter trail ingafumaneka kwi-lofsdalssparercial.
I-Karins Sportbod ivenkile yezemidlalo enezinto ezininzi, ibhayisekile/indawo yokutyibiliza kwikhephu. karinssportbodercial.
Indawo eyenza ibhiya i-Orsholms Brygghus orsholmsbrygghus.
I-Lofsdalen Bike Park iqulethe iikhilomitha ezingaphezu kwe-16 zeendlela, isitulo sale mihla esiyi-6, ukuqesha iBhayisekile, iVenkile, i-Eco, iNdlu Yomsebenzi kunye neSportbar/ivenkile yokutyela.
Jag är uppväxt i fjällen närmare bestämt i Lofsdalen i Härjedalen där jag är mycket på min lediga tid .Men bor sedan många år i Dalarna tillsammans med min son på 17 år i Falun. Jag tycker om att vistas i naturen och här i Falun är en fantastisk plats att både få uppleva att kunna åka skidor och långfärdsskridskor på vintern och vistas på sjön en härlig sommar dag. Tycker också om att åka upp till Lofsdalen för att njuta av de fina fjällen både vinter och sommar vår och höst med skoter skidor och vandring eller bara vara och att träffa mina äldre föräldrar som bor kvar där.l
Jag är uppväxt i fjällen närmare bestämt i Lofsdalen i Härjedalen där jag är mycket på min lediga tid .Men bor sedan många år i Dalarna tillsammans med min son på 17 år i Falun. Ja…
ndiza kufumaneka ngomyalezo kwaye ngamanye amaxesha ndikwisayithi.